Abavelisi be100G CFP2 | Kwichina I-100G CFP2 yeFektri kunye nabaXhasi
Imodyuli ye-CFP2-100GBASE-SR10 ixhasa ubude bekhonkco le-100m kwifayibha yemowudi eyahlukeneyo (MMF, G.652). Isiginali ye-100 yeGigabit Ethernet iqhutywa ngaphezulu kweevelengths ezine. I-Multiplexing kunye ne-demultiplexing ye-wavelengths ezine zilawulwa ngaphakathi kwesixhobo.
Inkqubo ye- I-CFP2 LR4 i-transceiver ebonakalayo idibanisa ukuhambisa kunye nokufumana indlela kwimodyuli enye. Kwicala lokuhambisa, imizila emine yemifudlana yedatha egciniweyo ifunyenwe, ibuyiselwe, kwaye idluliselwe kubaqhubi abane be-laser, abalawula ii-lasers ezine-EMLs ezinokufakwa kombane nge-1296, 1300, 1305, kunye ne-1309 nm embindini wamaza. Iimpawu ezibonakalayo emva koko ziphindaphindwe zibe yimowudi yendlela enye ngesihlanganisi esimiselweyo se-LC esecaleni kwicala lokufumana, imizila emine yemijelo yedatha ye-Optical idultiplexed yi-integratedult demultiplexer. Idata nganye yedatha ifunyanwa yi-PIN photodetector kunye ne-transimpedance amplifier, iphinde ibuyiselwe, kwaye idluliselwe kumqhubi wemveliso. Le modyuli inesixhobo esisebenza ngombane eshushu, kunye namandla ombane olawulo.
I-40KM 100G CFP2
I-100G CFP2 ER4 i-transceiver ebonakalayo idibanisa ukuhambisa kunye nokufumana indlela kwimodyuli enye. Kwicala lokuhambisa, imizila emine yemifudlana yedatha egciniweyo ifunyenwe, ibuyiselwe, kwaye idluliselwe kubaqhubi abane be-laser, abalawula ii-lasers ezine-EMLs ezinokufakwa kombane nge-1296, 1300, 1305, kunye ne-1309 nm embindini wamaza. Iimpawu ezibonakalayo emva koko ziphindaphindwe zibe yimowudi yendlela enye ngesihlanganisi esimiselweyo se-LC esecaleni kwicala lokufumana, imizila emine yemijelo yedatha yokubonakalayo ilungileUkuphindaphindwa kwe-DE ngokudityaniswa kokudityaniswa kwedultultlexlex. Idata nganye yedatha ifunyanwa kwakhona yi-PINumtshini wefoto kwaye Ukuhamba okungapheliyo isandisi-lizwi, ixesha kwakhona, Kwaye yadlulisela kumqhubi wemveliso. Le modyuli inefayile ye- ishushu-plugged ujongano lombane, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, kunye nolawulo lolawulo lwe-MDIO.
Ixabiso leHuawei Olt, I-Sfp C ++, IHuawei Qsfp +, Imodyuli yeFiber Optical, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Umthumeli weXfp,